တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ရှိ အနှိပ်ခန်းများတွင် အသက်(၁၈)နှစ်အောက် တိုင်းရင်းသူလေးများ ပိုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ရှိ အနှိပ်ခန်းများတွင် အသက်(၁၈)နှစ်အောက် တိုင်းရင်းသူလေးများ ပိုများ
တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ရှိ အနှိပ်ခန်းများတွင် အသက်(၁၈)နှစ်အောက် တိုင်းရင်းသူလေးများ ပိုများ
Posted by Sweet Tooth on Aug 21, 2012 in Community & Society, News | 8 comments
တရုတ်ပြည်နယ်စပ် ကျယ်ဂေါင်မြို့ရှိ အနှိပ်ခန်းများတွင် အသက်(၁၈)နှစ်အောက် မိန်းကလေးများ များပြားနေပြီး အများစုမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် တို့မှ ဖြစ်ကြသည်။အနှိပ်ခန်း အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပိုင်ဆိုင်နေပြီး ၎င်းတို့ ပိုင် အနှိပ်ခန်းများတွင် လုံခြုံသော စောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိကြသော်လည်း တိုင်းတပါးသား အနှိပ်ခန်းများတွင် လုံခြုံမှု မရှိပါ။”သမီးတို့ကို အပြင်ထွက်ခွင့် မပေးပါဘူး၊မလွှဲသာလို့ ထွက်ရရင်လည်း အုပ်ထိန်းသူ ပါ ပါတယ်၊ဒီအလုပ်က မိန်းကလေးတွေနဲ့ မသင့်တော် မှန်း သိပါတယ်၊သမီး ငွေစုပြီးရင် ပြန်မှာပါ ” ဟု အသက် ဆယ့်လေးနှစ်ရှိ ရခိုင်သူလေး အိမြတ်သူက ပြောပြသည်။ထိုမိန်းကလေးများ အတွက် သင့်တော်သော အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးပြီး နယ်စပ်ရှိ ရွှေ့ေ့ပြာင်း အလုပ်သမားများကို ထိရောက်သော ကူညီမှုများပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။နိုင်ငံတော်မှ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်ဟု ပြောကြားနေသော်လည်း နယ်စပ်များ တွင် ထိုကဲ့သို့သော ကလေးသူငယ်များ အတွက် မသင့်တော်သော အလုပ်အကိုင်များမှာ အောင်မြင် ကြီးပွားနေကြသည်။
Sweet Tooth has written2post in this Website..
View all posts by Sweet Tooth →
ဆယ့်လေးနှစ် ဆိုတော့ ကလေး/ကလေးသာသာ အရွယ်လေးပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ ! မိဘတွေ မရှိတော့ဘူးလား မသိ ! ဂျယ်ဂေါင် ကို ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ် ။ နည်းနည်းတော့ကြာပြီ ။ ပိုက်ဆံရှိရင် အကုန် ရတဲ့နေရာ ။ မိန်းမ ၊ မူးယစ်ဆေး အစုံပေါ့ ။ အေကိုက်တဲ့ လူတွေ ဘိန်းစားတွေ ရာမ သုံးတဲ့ အမျိုးသမီး အမျိုးသားတွေလည်း အများကြီးတွေ.ဘူးတယ် ။ကလေးမလေးတွေ အနေနဲ့ မိဘမောင်ဘွား တွေနဲ့ အတူနေပြီး ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်တာမျိုး မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုမှ မနေသင့် မလုပ်ကိုင်သင့်တဲ့ အရပ် ။
မြန်မာပြည်ကနေ.. နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်.. နေထိုင်နေကြတာ.. မြန်မာလူဦးရေ… ၄-၅သန်းလောက်ရှိမယ်..
မြန်မာပြည်ထဲလာအလုပ်လုပ်နေထိုင်နေတဲ့.. နိုင်ငံခြားသား.. ဘယ်နှယောက်လောက်ရှိမလဲ. ??
Khin Nwe says:
ye yant hlaing ရေ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြည်သူလူထုတွေကဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့ကြတာက ဦးနေ၀င်း ခေတ်ကနေ စစ်အစိုး၇
ခေတ်(စစ်တပ်တွေကလယ်ယာမြေတွေသိမ်း၊လူတွေကို အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေး) ၊ခေတ်အဆက်ဆက်ပါပဲ ယောက်ကျားတွေ ဆို၇င် သူများနိုင်ငံမှာ ကျွန်ခံ၊မိန်းခလေးအများစုကတော့
သူများနိုင်ငံမှာအိမ်ဖော်၊ပြည့်တန်ဆာ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်လေ။ မိဘဆွေမျိုးတွေ ၇ှိကြပေမဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀
နဲ့ ကြာကြာမ၇ပ်တည် နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အ၇င်းအနှီးမလိုတဲ့ ခန္တာကိုယ်ေ၇ာင်းစားတဲ့ ဘ၀ကိုေ၇ာက်သွား
ကြတာပါပဲ ၇ဲ၇င့်လှိုင်ေ၇။ကျွန်မကတော့ ၇ခိုင်ပြည်မှာတာဝန်ကျခဲ့တုန်းကအတွေ့အကြုံ လေးတွေပါပဲ……..
ကျနော်တို့ ဆီက ရခိုင်တွေခုလို ကြားရတော့ စိတ်မကောင်းပါ
သမီးတို့ ။ကျနော် တို့ ညီမအရွယ်၊အမအရွယ်တွေမဟုတ်လားးးး
အကိုလား .. အမလားတော့ သိဘူး ..
သတင်းဓါတ်ပုံနဲ့တွဲတင်တာ မရလို့ ဆိုလားပဲ ..
ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် …
ပုံ တင်ပုံ တင်နည်းတွေကိုလည်း ညာဖက်အခြမ်းက …
ဆိုတဲ့ အောက်က လင့်ခ်တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါလို့ ..
စားဝတ်နေရေးအတွက်သာမက ဝတ်ချင်စားချင် တာက တမျိုး ၊ မိဘကိုလုပ်ကျွေးပြုစုချင်
တာက တဖုံ ၊ ဘဝပေးအခြေအနေအ၇ပ်၇ပ်တွေကြောင့် လုပ်မိလုပ်၇ာလုပ်ကြ၇တာ ။
ကိုယ့်နိုင်ငံက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းကောင်း စီမံပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်
တဖြည်းဖြည်း ပပျောက်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ ။
မန်းတလေးမြို့ က အနှိပ်ခန်းတစ်ခုမှာလဲ ၁၅နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ကရင်မလေးတွေ တွေ့ ခဲ့ဖူးတယ်
သူရို့ ခဗျာလဲ ဒါလုပ်မှပဲ လခကောင်းကောင်းရပြီး…အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေကို ထောက်ပံ့နိုင်ကြတာကလား။ ဘောစိတွေရဲ့ ကစ်ပင်း / ရည်းစားဖြစ်သွားတဲ့အခါကြ ၂သိန်းဖုန်းတို့ ၊ ဆိုင်ကယ်တို့ နဲ့ ဖြစ်သွားကြတာလဲ မြင်ဖူးပါရဲ့ 
သူတို့လည်း လစာကောင်းလို့ လုပ်ကြရတာပါ။အိမ်က ဒီအလုပ်,လုပ်နေ မှန်း မသိကြပါဘူး။လစာ ကလည်း သူတို့ ကိုပေးရတဲ့ ငွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ ပဲရကြပါတယ်။အရေးကြီးတာက သူတို့ကို ဟိုလိုဟာတွေနဲ့ တစ်တန်းစားတည်းလို့ မသတ်မှတ်ကြပါနဲ့။သူတို့ ဘဝ ကိုပြန်ထူထောင်လို့ ရပါသေးတယ်။
မဟာရာဇာ ကိုအံဇာတုံး ခင်ဗျာ ဓာတ်ပုံက တင်လို့ ရသွားပါပြီ၊ကျွန်တော်က မကျွမ်းသေးလို့ပါ။ပြီးတော့ ဟိုလေ ကျွန်တော်က နောက် ၃ နှစ်လောက်နေရင် မိန်းမ ယူတော့မှာ ခင်ဗျ။အစ်ကို ထင်သလို ဟိုဟွာ ဟုတ်ဘူးရယ်။Sorry နော်။ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။